TOOS/LIVE MOGADISHU: Jawaari oo hadda la shiray Xildhibaanada Beesha Daarood hadda, Muxuuse u sheegay? | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
TOOS/LIVE MOGADISHU: Jawaari oo hadda la shiray Xildhibaanada Beesha Daarood hadda, Muxuuse u sheegay?
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka doorashada Muqdisho ayaa ah kuwa iska soo daba-dhacaya, waxaana hadda musharaxiinta Gudoonka baarlamaanku ay hadda shirarkii u dambeeyey la yeelanayan mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha waqtigu ka dhamaaday Prof Maxamed Sh Cismaan Jawaari oo hadda la kulmay Xildhibaanada beesha Daarood ayaa ka helay balan qaadkii ugu dambeeyey oo ku aadan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
Prof Jawaari ayaa u sheegay Xildhibaanada in loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii aysan Soomaaliya daganaansho la’aan siyaasadeed waqtigan cagaha ula galin, maadaama ay jiraan kooxo doonaya in ay ka shaqeeyaan qalalaasahan.
Jawaari ayaa la rumeysan yahay in uu hadda haysto codad gaaraya 110 cod, waxaana suuragal ah in ay wax badan isbedelaan marka ay bilaabato cod bixintan.